Codsiyada - Zhejiang Fuhsite Silicon Co., Ltd.
Dahaarka Iyo Rinjiga
FST silica qaxwada waxaa loo isticmaali karaa in wax laga beddelo nidaamka thixotropy, nidaamiso is -dheellitirka, kor u qaadista socodka lacag -la'aanta ah, ka -hortagga caking -ka iyo wax -ka -beddelka saamaynta korantada. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu xakameeyo dhaldhalaalka qaar ka mid ah dahaadhooyinka, sida urethane satin dhameysatay.
Sealsada iyo Koollada
Xirmooyinka dhejiska iyo dhejiska, silica qumman ayaa kaalin weyn ku leh xakamaynta rheological -ka iyo xoogga nafsaaniga ah.
Marka silica qaaliga ah lagu daro oo lagu kala firdhiyo xabagta iyo dhejiska, shabakad isku -darka silica ah ayaa samaysma, sidaas darteed hantida qulqulka matrixku waa la xaddiday oo dheef -shiid kiimikaadku wuu kordhay, xoojinta hantida oo kor loo qaaday; laakiin, marka xiiridda la adeegsado, xidhmooyinka hydrogen iyo shabakadda silica ayaa jaba, is -beddelka shaxanka ayaa hoos u dhacaya, tani waxay u oggolaanaysaa dhejiska iyo dhejiska in si habsami leh loo adeegsado; marka xiiridda la saaro, shabakadda dib loo soo celiyo iyo is -beddelka shaxanka ayaa kordha, tani waxay ka hortagtaa dhejiska iyo dhejiska in ay suuxaan inta lagu jiro habka daaweynta.
In khad daabacaadda kuleylka ah, silica ceeriin ee hydrophilic ayaa dedejisa xawaaraha qallajinta, waxay ka caawineysaa ka fogaanshaha alaabada qallafsan iyo kuwa cawlan ee ay keenaan khad qoyan.
In khad daabacaadda caadiga ah, hydrophobic silica silica xadeeya khad biyaha xayeysiiya oo ka saara xumbo, xoojinta midabka ayaa hagaagtay halka dusha khadku weli ifaayo. Daabacaadda gravure, daabacaadda duufaanta iyo daabacaadda xariirta, silica qaaliga ah waxay u shaqaysaa sidii wakiilka ka-hortagga dejinta, waxayna xakamayn kartaa mugga khadka halka daabacaha uu u shaqeynayo natiijooyin daabacaad nadiif ah oo cad.
Caagagga ku salaysan PVC
Silica macmacaanka ah waxay bixisaa xakamaynta rheology, waxay ka hortagtaa dhejinta, waxayna wanaajisaa guryaha korantada. Dharka daabacan ee vinyl wuxuu wax ka beddelaa sifooyinka vinyl si uusan u dhex gelin marada, laakiin wuxuu joogaa dusha.
Rubber -ka iyo xeryaha caagga ah
Cinjirka silikoonku waa gabow u adkaysta, heerkulka sare iyo hoose u adkaysta iyo korontada-dahaaran. Si kastaba ha noqotee, silsiladda molecular ee caag silikoon ah ayaa jilicsan, xoogga is -dhexgalka ee u dhexeeya silsiladaha molecule waa daciif, sidaa darteed caag silikoon ah ayaa loo baahan yahay in la xoojiyo kahor isticmaalka dhabta ah.
Silica Fumed waxaa loo adeegsadaa sidii dhumuc-weyne iyo wakiilka thixotropic ee soo-saaridda qalabka dahaarka ee naxaasta iyo fiilooyinka fiber-optic.
Maaddooyinka Polyester -ka iyo jaakadaha Saliidda
Silica macmacaanka ah ayaa si weyn loogu adeegsadaa maaddada polyester -ka si loo soo saaro doonyaha, tubbooyinka, dhaamanka xamuulka, iyo codsiyada kale ee adeegsada lakabyada dahaarka leh. Meelaha laminate -ka, alaabtoodu waxay u shaqaysaa sidii dhumuc weyn, oo ka hortagaysa dheecaanka dheecaanka xilliga dawaynta. In jaakadaha jel, saamaynta dhumucdu waxay ka hortagtaa sag, kor u qaadista dhumucda filimka iyo muuqaalka. Meelaha dhejiska iyo dayactirka xeryahooda, waxay xakameysaa dhumucda, socodka iyo thixotropy si loo gaaro natiijooyin lagama maarmaan ah.
Silica khamiirka leh waxay siisaa saamayn dhumuc aad u fiican macdanta iyo saliidaha dardaaranka, saliidaha silikoon iyo isku darka.
Daawooyinka iyo Cosmiska
Silica khamiirka leh waxay leedahay cabbir yar oo yar, aag weyn, qaab dhismeed dalool leh iyo sifooyin jireed iyo kiimiko oo gaar ah, takhasuskaani wuxuu siinayaa silica khamiir leh awoodda wax-qabad wanaagsan iyo xasilloonida bio-kiimikada sare.
In la isku qurxiyo, waxa kale oo loo isticmaalaa sida wakiilka rheological iyo gargaarka anti-caking. Araajida waxaa ka mid ah kiniin, kareem, budo, jel, cadar, cadayga iyo ciddiyaha. Orisil waxay ka hortagtaa kala -goynta wejiga ee nidaamyada emulsion.
Batariyada - waxaa loo isticmaalaa batteriga asiidhka rasaasta.
Iyada oo ay ugu wacan tahay habka wax-soo-saarka gaarka ah iyo qaab-dhismeedka saddex-cabbir ah, silica khamiirka leh wuxuu ku raaxaysanayaa hantida cabbirka walxaha asaasiga ah ee yar yar, aagga dusha sare ee gaarka ah, porosity-ka sare iyo xasilloonida kuleylka, isagoo siinaya wax kuleylinta kuleylka aad u hooseeya kuleylka.
Marka lagu dabaqo budada cuntada, silica macmacaanka ah waxaa loo isticmaalaa sidii wakiilka ka hortagga caanaha iyo gargaarka socodka bilaashka ah. Sababtoo ah isbeddelka heerkulka, huurka iyo cadaadiska inta lagu jiro kaydinta iyo muddada gaadiidka, budadu waa u fududahay keegga, taas oo saamayn xun ku leh tayada iyo nolosha shelf ee badeecadda dhammaadka ah.
Maaddooyinka Polyester -ka ee aan la buuxin (UPR)
Badeecadaha UPR, silica silica waxay siisaa daahfurnaan sare iyo astaamo jireed oo wanaagsan xitaa marka fiirsiga hooseeyo. Tani waxay hagaajineysaa tayada badeecadeeda hoosteeda.
Bacriminta way fududahay in keega la sameeyo xilliga wax -soo -saarka, kaydinta iyo muddada gaadiidka sababta oo ah isbeddelka heerkulka, huurka iyo cadaadiska. Dhibaatooyinka ay keenaan bacriminta la dubay waxay u horseedi doontaa isbeddel xagga tayada alaabta ah. Silica macmalaysa waxay u oggolaanaysaa sifooyinka qulqulaya ee bacriminta in si habsami leh loo habeeyo, awoodda xayeysiinta wanaagsan iyo kartida weyn ee silica macmacaanka ayaa hagaajinaysa hantideeda ka hortagga.
Silica -macmalaysa, sida dib -u -soo -kabashada qulqulka, ayaa lagu daraa quudinta horudhaca ah ee macdanta isku -darka ah, fiitamiin fitamiin iyo waxyaalo kale oo budo ah oo ku jira quudinta xoolaha si kor loogu qaado hantida socota. Silica -macmalaydu waxay si weyn hoos ugu dhigi kartaa isbeddellada wax -ka -qabashada si loogu oggolaado quudinta xayawaanka xaalad durdur wanaagsan leh, kordhinta wax -soo -saarka wax -soo -saarka iyo tayada badeecadda.
Alaabta Kulul, Khariidadda bogga Amorphous Fumed Silica, Aerosil Fumed Silica, Aerosil 200 Silica Fumed, Hydrophilic Fumed Silica,